Iwu dị nsọ nke Mans - WRSP
NDỊ NA-ECHI NKE NDỊ MMADỤ (HOOM)
1904 (Eprel 18): Earl Wilbur Blighton mụrụ na Rochester, New York.
1968: E hiwere Iwu Nsọ nke MANS na San Francisco, California.
1974 (Eprel 11): Blighton nwụrụ na Pacifica, California.
1978: Vincent Rossi na Patricia Rossi weere ọnọdụ nke ndị isi ngalaba na-adịgide adịgide General.
1984: Usoro Dị Nsọ nke MANS malitere ịkwaga Ọwụwa Anyanwụ Ọwụwa Anyanwụ.
1988: A natara Holy Order nke MANS n'ime Archdiocese nke auto na-arụ na Queens, New York wee bụrụ Kraịst Onye nzọpụta Brothertù hoodmụnna (CSB).
Earl Wilbur Blighton mụrụ na Rochester, New York na April 18, 1904. E gosipụtara ya na Maịlị Methodism na Roman Katọlik mgbe ọ dị na Rochester ma sonyekwa na ndị mmụọ, ndị Masonic, na ndị New Thought. O nwere ike ịbụ na ihe ndị Masonic na Katọlik ndị mbụ malitere (mbụ alụmdi na nwunye ya bụ nke Roman Katọlik), mesịrị mepụta iwu na omume maka Òtù Nsọ nke MANS bụ nke mere ka ndị Masonic na ndị Roman Katọlik na-emeghachi omume. Nwa nke atọ nke Blighton site na alụmdi na nwunye mbụ ya ghọrọ onye ụkọchukwu Katọlik.
N'oge 1940s Blighton na-arụ ọrụ dịka onye nyocha na onye injinia maka ụlọ ọrụ okporo ụzọ okporo ụzọ General na Kamel Rochester. O nyekwara aka n'iwu ụlọ ọrụ redio maka United States Navy ma mepụta ngwá egwu maka Eastman Kodak. Blighton mepụtara ihe eletrik nke ọ kpọrọ ụzarị ray ray. Site na ikpochapụ ndị ọrịa na-acha ọkụ ọkụ, o nwetara ihe ịga nke ọma dị ka onye na-agwọ ọrịa ime mmụọ. N'ikpeazụ, ọrụ a mere ka ejide ya na nkwenye maka ịme ọgwụ na-enweghị ikikere na 1946.
N'oge njedebe 1940s, Blighton kwagara West Coast ma soro ya na mpaghara mpaghara nzuzo, gụnyere Spiritualism, Order Ancient and Mystical Rosae Crucis, òtù UFO, Church Yoga Church, na ụdị ọgwụgwọ ndị ọzọ dị iche iche. Isi nke Nzukọ Nsọ nke MANS hiwere na 1966 site na obere ìgwè nke ndị ikom na ndị inyom gbakọtara ịnụ ka Blighton na-akụzi klas na "esoteric Christianity" (Lucas 1995: 2). Ndị otu ahụ mere ka ndị òtù ya malite n'oge hippie counterculture nke jupụtara n'ógbè San Francisco n'etiti 1965 na 1970. Dị ka ọtụtụ ndị na-eto eto n'oge iri afọ ahụ, ndị na-eso Blighton chọrọ mgbagha ime mmụọ n'ezie, obodo, na ịga ozi. Blighton wepụtara Akwụkwọ Nsọ nke MANS na 1968 na San Francisco.
Blighton haziri aha ya na ndị nkụzi Katọlik dịka ndị Jesuit na Franciscans na nkwenkwe na omume ndị sitere n'aka ọdịnala Hindu, Rosicrucianism, New Thought, na Katọlik. N'etiti 1969 na 1974, o guzobere ụlọ ọrụ ndị ọrụ na ogige ọzụzụ na obodo iri isii na iri anọ na asatọ. Ndị òtù ahụ weere nkwa nkwa ụgha nke ịda ogbenye, nrubeisi, ịdị ọcha, ọrụ, na ịdị umeala n'obi, na-eyiri uwe ndị uwe ojii dị iche iche, na-eme ọnụ na-ebu ọnụ mgbe nile, ma na-ejide akụ niile. N'adịghị ka ụlọ ndị mọnk Katọlik omenala, iwu "ụlọ nna" bụ ndị ụkọlọtọ, ụmụ nwanyị dị elu na ụkọchukwu, ma nakweere omume ime mmụọ site na ndị na-abụghị Ndị Kraịst.
Na 1971, usoro ahụ mepere Raphael House, ebe nchekwa maka ndị na-enweghị ebe obibi na maka ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị na-agbapụ ọnọdụ ndụ ọjọọ na San Francisco. Ihe enyemaka nke oru a nyere aka ime ka uzo gafee United States iji tinye ebe obibi ndi ezoro ezo maka ndi ozo nke ime ihe ike n'ulo. Ụlọ ahụ nyere aka mee ka ihe nchekwa dị mma maka akwụkwọ ahụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ, bụ Mayor Dianne Feinstein nke San Francisco na-ekwu na izu nke November 22-28 bụ "Raphael House Week." Ụlọ nke Raphael ka na-arụ ọrụ taa na San Francisco na Portland, Oregon, ọ bụ ezie na ha na-arụzi ọrụ ugbu a dị ka òtù ndị nweere onwe ha n'achọghị uru. Ụlọ Raphael dị na Portland bụ otu ụlọ ọrụ ime ihe ike dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche maka ịlụso ọgụ ọgụ na mmetụta nke ime ihe ike na-akpachi anya na ụzọ dị iche iche. Ọ na-enye ebe obibi mberede na nzuzo, usoro 24 hour nke nsogbu ụlọ, usoro mgbanwe na ihe omume akwadoro, ụlọ ọrụ ndị na-abụghị ndị ọbịa na mmekorita ya na Ụlọ ọrụ ndị uweojii Portland, ma na-arụkwa ọrụ iji kwụsị ime ihe ike site na mgbakwunye obodo na agụmakwụkwọ.
Afọ ikpeazụ nke Blighton hụrụ ọhụụ atọ ga-enwe mmetụta dị oke mkpa n'ọdịnihu. Akpa, na 1972, Blighton kere Akwụkwọ Ọrụ. Akwụkwọ a bipụtara na nke a na-ebipụta akwụkwọ akọwapụtara Blighton nke millenarian, mweghachi, na ọhụụ ime mmụọ. Ndi mmadu nakweere akwukwo a dika mkpughe doro anya nke Jisos Kraist maka Age Obo na-abia. Ha chere na otu ụbọchị, a ga-ewere ya dị ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị nsọ. Ndị na-akpọghachi aha na-aga Akwụkwọ Ọrụ klas kwa ụtụtụ Satọdee, ebe edere ederede ma tụlee. Nke abụọ, site na njedebe nke 1972, òtù ahụ nụchara nhazi ụlọ ọrụ ya na ebe ọrụ mgbarịta ụka ya, ma mepụta usoro mmemme ọhụrụ, tinyere ndị na-eso ụzọ na ndị Kraịst. Ihe omuma a bu ime ka ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu. Nke atọ, na 1973, isi ụlọ ọrụ ahụ dị na San Francisco gbara ọkụ, Blighton nwetakwara egwu abụọ. Omume ọjọọ ndị a mere ka enweghi mmetụta nke ịbụ onye ndu na ndu ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ na ndị na-ejikarị mmekọrịta enyi na nnukwu obodo n'ihi ọrụ ọrụ ndị na-aga nke ọma.
Ọnwụ Blighton na mberede na 1974 kpalitere ọgba aghara nke afọ anọ n'usoro. Otu "ndị nkuzi-nkuzi" (nke kachasị nke ime mmụọ) na-elekọta ìgwè ahụ ma gbalịa ịkọwa nkọwa nke onwe ha banyere ozizi Blighton. Oge a nke enweghi ike egbochi ịbanye, Otú ọ dị. Na 1977, òtù niile ahụ ruru ogo ya na 3,000. N'oge a kwa, emepere emepe na London, Bordeaux, San Sebastian, Amsterdam, Buenos Aires, Tokyo, na San Juan, Puerto Rico. Enweghị nchekasị maka nsogbu ndu ndú a bụ mgbe, n'oge okpomọkụ 1978, Vincent na Patricia Rossi aghọwo ndị na-ahụ maka ndị nduzi na-adịgide adịgide General.
Vincent Rossi bụ onye mbụ na-amụ akwụkwọ na Roman Catholic tupu ya amalite ọrụ dịka onye ọkachamara n'asụsụ Chinese na ngalaba ọgụgụ isi nke US Navy. Na nkwupụta okwu n'ihu ọha mgbe ọ nwụsịrị dị ka Director General, Rossi kwupụtara n'ụzọ doro anya ọhụụ Gnostic na New Age nke ọrụ ozi ahụ. Ọ na-ekwu na Jizọs na-akpọ ụmụ mmadụ ka ha ghọta nghọta ọhụrụ nke ozizi Ndị Kraịst, nghọta nke dabeere na "Mkpughe ndụ" ma wepụ ya na ihe nnọchianya, nkịta, na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị gara aga. Okposụkedi Jesus ekedide "ata Abasi emi odude ke esịt," ndien enye ama enen̄ede ọsọn̄ọ ada, enye ikenyeneke ndituak ibuot nte Abasi kiet. Ozizi a na-emelite n'usoro iwu ahụ, dị ka Rossi si kwuo, bụ iji kụziere nkụzi nke Kraịst n'ụzọ dị iche iche n'oge ọkara afọ. Ozizi ndị a zuru ụwa ọnụ ga - eduga Ndị Kraịst karịa nkwenkwe okpukpe omenala ma na-eme ka ha nwee ọnọdụ nke ndị na-achọ ga-achọpụta na ha dị na "Nna-Nne Chineke." Dịka akụkụ nke ozi a, iwu ahụ ga - achọ iwepụ ihe mgbochi nke kewara mmadụ, gụnyere ndị e wuru n'aha Jizọs.
Ntugharị Rossi malitere ime ka ọha na eze mara onwe ha site na Rosicrucian / Theosophical origines na isi Christianity. Mgbe ndị Rossi gbasịrị ụka na Protestant evangelicalism na Roman Katọlik, ha gwara ìgwè ahụ ka ha mụọ Chọọchị Ọtọdọks nke Ọwụwa Anyanwụ Ụwa. Akwụkwọ ozi a gbasoro ntụgharị uche nke Rossi na Eastern Orthodoxy n'oge mmalite 1980s. N'otu oge ahụ, Rossi mere ka ìgwè ahụ gbasaa n'ime obodo iri dị na United States na Europe ma malite ịkwalite usoro nke ime mmụọ ya. N'etiti 1982 na 1986, òtù ụmụnna na-elekwasị anya ike ya n'ichebe "omenala ọdịnala nke oge ochie nke Kraịst," ememme mmemme n'oge, na ịmepụta ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ maka ụmụ ya dabere na ụkpụrụ Ndị Kraịst ọdịnala (Lucas 1995: 166- 94).
Site n'enyemaka nke otu onye mọnk nke Ọtọdọks nke Russia, Herman Podmoshensky, Rossi mere ka ọ ghọọ ndị Chọọchị Ọtọdọks Russia. Siobhan Houston na-ede, sị, "mgbe (Podmoshensky) bịara na Nzukọ Nsọ nke MANS na 1983, o nyere nkwado dị egwu na nke doro anya nke òtù ahụ chọrọ" (Gerjevic 1999: 2). Eji ozizi Orthodox na-emechi usoro ime mmụọ nke Blighton. Mgbe afọ ole na ole gbasara mkparịta ụka na ọchịchị ndị Ọtọdọks dị iche iche, a nabatara Archdiocese nke Queens, New York, na 1988 site n'aka Metropolitan Pangratios Vrionis. Ndị òtù 750 fọdụrụnụ nke òtù ụmụnna bụ ndị e mere baptizim ọzọ ma ghọọ Kraịst Onye Nzọpụta Onye Ụmụnna (CSB). Ha kwusara ozi ọhụrụ ha dịka "na-eweta ìhè na eziokwu nke Iso Ụzọ Ọtọdọks na ndị na-anwụ anwụ n'ụzọ ime mmụọ n'oge ndị a na-agba ọchịchịrị ma dị oké mkpa" (Lucas 1995: 195-231).
Mkpebi nke mkpebi ịghọ ndị Chọọchị Ọtọdọks mere ka ndị òtù abụọ ahụ ghara ịda mbà n'oge na 1990s. Obodo wee malite ịkụda ya na mkpochapụ nke òtù ụmụnna ndị mọnk na nkwenye nke òtù ya n'ime ezinụlọ nuklia. Nsogbu ọzọ bụ enweghị nkwanye ùgwù nke Pangratios 'archdiocese site na Nzukọ Kwesịrị Ekwesị nke Ndị Bishọp Ọtọdọks n'America (SCOBA), bụ isi na-adabere na ya maka ọchịchị ndị Ọtọdọks na North America. Na njedebe 1990s, na-esote ihe akaebe nke Akwụkwọ Pangratios 'nkwenye maka mmekorita na umuaka, ndị òtù CSB na-esi na Archdiocese nke Queens na-atụgharị anya nabatara na ọchịchị SCOB nke dị na United States. Ọ bụ ezie na ndị òtù ụfọdụ esonyere Chọọchị Ọtọdọks Serbian ma ọ bụ Chọọchị Ọtọdọks nke Russia na-abụghị Russia, a nabatara ọtụtụ ndị nzuko ụka CSB na Chọọchị Ọtọdọks na America. A na-etolitekwa otu obere ìgwè nsị mgbe 1990 gasịrị.
HOOM nwere usoro nkwenkwe na-agbanwe agbanwe nke na-enwe mgbanwe dị ukwuu dịka mmegharị ahụ mepụtara n'oge oge. Usoro a bụ njikọta dị iche iche nke esotericism nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa, millennialism apocalyptic, Christian monasticism, Philosophy New Thought, na omume ime mmụọ nke Yogic.
Blighton mepụtara usoro ihe omume ime mmụọ ya site n'ọtụtụ ebe. Ndị a gụnyere Order Ancient and Mystical Rosae Crucia (AMORC), òtù Rosicrucian nke isi ụlọ ọrụ ya dị na San Jose, California. Blighton weputara nkuzi AMORC abụọ n'ime usoro nsọ nke usoro atụmatụ nke MANS. Nke mbu bụ na e nwere mmadụ abụọ, ndị dị n'ime, ndị na-enweghị isi, na onye na-amaghị onwe ya. AMORC kụziiri ndị òtù ya iji mee ka ha nweta "amamihe" site n'ime onwe ha. Ha na-eji nlezianya uche na ihe ngosi anya iji zụlite amamihe a. Ihe abụọ AMORC kụziiri Blighton bụ nkwenkwe na "ụlọ ọgwụ psychic" ma ọ bụ chakras, ozizi nke sitere na omume Hindu yogic. A kwenyere na Chakras bụ akụkụ dị iche iche nke ahụ na-eme ka mkpụrụ obi na-adị ike n'ime ahụ. A na-ekwu na ụlọ ọrụ chakra atọ kachasị mkpa maka ndị na-agba ume ime mmụọ na-ejikọta ya na ahụ ahụ pituitary, na ọkpụkpụ ahụ, na nke plexus anyanwụ.
Ihe nke abụọ nke nkwenkwe Blighton bụ Chọọchị Yoga Ndị Kraịst. Blighton malitere ịga klas na otu a na 1963 na San Francisco, n'oge na-adịghị anya ka nke ahụ gasịrị kwagara na monastery chọọchị dị na Virginia City, Nevada. N'ebe obibi ndị mọnk Blighton gụrụ akwụkwọ na Kriya Yoga. Ụdị yoga a na-eji eme iku ume, mmegharị uche, na ịchọrọ chakra iji nyere onye mmụta aka ịchọta "ìhè" na "imata onwe ya." Ịhụ ìhè bụ ahụmahụ nke "ìhè Chineke" n'ime ahụ ma nhụta onwe onye bụ kpọmkwem, ahụmahụ nke "Chineke," Ebe Ịbụ (Lucas 1995: 21). Mgbe ọ nọ n'ụlọ obibi ndị mọnk, Blighton, na-agbaso omume siri ike, nwetara ume ime mmụọ dị ike nke na ọ kọwara dị ka ike ọkụ nke si n'ụbụrụ ya pụta ma jupụta n'ahụ ya.
Mgbe Blighton ka na-akpọ òtù ya bụ Science of Man Church, na 1967-1968, ọ malitere ịmepụta ụdị na omenala ndị ga-abụ ọdịiche dị iche iche nke Akwụkwọ Nsọ nke MANS. Ndị 30 na 40 so na Science nke Man Church na-akpọkarị Blighton dịka "Nna" ma rịọ ha ka ha yikwasị ndị uwe ojii na-eji ejiji (Lucas 1995: 30). Otu akụkụ dị mma nke ọzụzụ ndị otu bụ "patrols n'okporo ámá" (1995: 31). A malitere ime njem ndị a site na distrikti dị iche iche nke San Francisco ka ụmụ akwụkwọ nwee ike itinye ihe ọmụma ha nwetara site na klas Blighton na ọnọdụ ndụ n'ezie. Ụmụ akwụkwọ ahụ, na-eji ejiji ndị uwe ojii ha, ga-ejegharị na ala ndị dị ala ma ọ bụ ndị omeiwu jupụtara na-ele anya na ikuku ọkụ na-enwupụta na ya. "Ndị na-agbagharị n'okporo ámá" ga-aghọ ụkpụrụ omume maka ụmụ akwụkwọ chọrọ (1995: 32).
Nchikota nke ndi Kristian na Masonic / Rosicrucian malitere ibuta na usoro nkwenye nke Science nke Man Church site na opupu nke 1967. Blighton hụrụ ihe nnọchianya dị ka ụzọ isi gosipụta ike ime mmụọ n'elu gburugburu ebe obibi. Ọ kụziri na ọnọdụ ihe onwunwe ma ọ bụ ọnọdụ ime mmụọ nke mmadụ na-achọ n'aka ndụ ya nwere ike inweta site na nlele nke akara akara na ọdụ ụgbọelu na okwu "ike" (Lucas 1995: 38). Blighton chere na ihe nile dị n'eluigwe na ala bu ụzọ si na gburugburu, square, na triangle. Ekara nọchitere anya Chineke na "ịdị n'otu nke ihe niile" (1995: 39). Ihe odide ahụ na-anọchite anya usoro okike. Ebe a na-anọchite anya "ụgbọelu ihe onwunwe" (1995: 39). Ihe nnọchianya nke usoro ahụ wee ghọọ triangle n'ime gburugburu gburugburu otu square.
Na 1967, Blighton dere The Golden Force, bụ nke o depụtara ihe bụ isi nke ozizi mmalite ya, "iwu zuru ụwa ọnụ" nke ike uche. Blighton kwupụtara na iwu a bụ "usoro dị ukwuu nke Onye Okike setịpụrụ na Ụkpụrụ Anyanwụ nke Eluigwe na Ala ka Ihe Okike Ya wee nwee nnwere onwe" (Lucas 1995: 39). Blighton kwenyere na a hapụwo ozizi a site na chọọchị dị iche iche nke Ndị Kraịst, ọ bụ ezie na Blighton kwuru na ọ bụ "Nna-ukwu Jizọs" kụziri (1995: 39). Blighton hụrụ nkuzi bụ isi nke Kraist banyere "iwu ụwa dum" dịka otu n'ime ọrụ ndị isi.
Na 1967, Blighton malitere iji klasasị Saturday ya maka nnọkọ ime mmụọ. Ụlọ ahụ gbara ọchịchịrị kpamkpam, ma e wezụga maka ìhè oriọna, na oche ndị ahụ nọ na ya. N'oge ndị a, Blighton ga-enweta ma nye "ozi gbasara uche" (Lucas 1995: 39) Dika Nzukọ Nsọ nke MANS si bịa, ndị òtù ga-ekwenye na ozi ndị a sitere na Jizọs Kraịst n'onwe ya. Enwere ọtụtụ nkwenye nke usoro a site na ozi ndị a.
Blighton nwetara ozi abụọ na March, 1967 nke nwere ụda olu dị ike. Ozi mbu na-egosi na Ụwa na-abanye n'oge mgbanwe ime mmụọ. Blighton kwenyere na ọ bụ ọrụ ya iji dozie ndị a chụpụrụ maka afọ ọhụrụ a. Ozi nke abụọ kwuru banyere ihe mgbanwe ime mmụọ na-abịanụ pụtara. Blighton kọwara na ikpo ọkụ nke ụwa na-ejupụta ìhè na ìhè nke anyanwụ na "ìhè nke Kraịst." Ọ hụrụ nke a dị ka "ìhè" ụwa nke ga-eme ka mgbanwe mgbanwe nke ụwa na ụdị ndụ ya. Blighton kwenyere na mmadụ aghaghị ịgafe ọzụzụ ime mmụọ dị elu iji bie ndụ nke ọma n'oge a. Ọ bụ ozi ahụ iji nyere ndị mmadụ ohere ka ha mara banyere "ìhè" a dị na mbara igwe na ịkwadebe ha ka ha rụọ ọrụ n'ime ụwa a gbanwere site na "mmalite anyanwụ" nke ndị ụkọchukwu na-elekọta (Lucas 1995: 40).
Ozi dị mkpirikpi na June, 1968 sitere na ndu ndu mmụọ nke Blighton na-enye ihe àmà nke Akwụkwọ Nsọ nke Nhazi Millenarian / mweghachi na mmalite afọ ya. Ozi ahụ kwuru na ndịozi, Pọl nke Tọsọs, ụmụ nwanyị na-eso ụzọ Jizọs, na ndị òtù nke Essene enweghachiri ndụ n'oge a. Na-arụ ọrụ site na nsụgharị dị nsọ nke mmadụ, mkpụrụ obi ndị a alọghachila n'ụwa iji kwadebe ụmụ mmadụ maka oge ọhụrụ nke mmụọ. Ụmụ akwụkwọ Blighton bịara kwenye na onye nkuzi ha bụ nlọghachị nke Pọl onyeozi.
Ọtụtụ mgbanwe dị mkpa na ozizi na ememme mere n'etiti 1968 na 1972. Na July 24, 1968, Blighton na nwunye ya, Helen Ruth Blighton, gbara akwụkwọ iwu ndị isi nke Akwụkwọ Nsọ nke MANS na steeti California. Iwu iwu ndị a kọwara usoro nzube, usoro, na sacramental. Iwu iwu ndị ahụ kwuru na ebumnuche nke otu a "chekwaa ozizi amamihe Ndị Kraịst oge ochie maka ọgbọ na-abịanụ, mezuo ozi nke Elu Elu Cross gosipụtara, kwalite ụlọ ndị nwoke, seminarị, ọrụ, ebe nduzi ntorobịa, na ụlọ ọgwụ "(Lucas 1995: 48). Blighton chọkwara ime ka o doo anya na iwu ahụ nke Order Order nke MANS ga-abụ onye nkịtị, nke apolitical, na onye na-anabata ihe niile. Iwu iwu ndị ahụ kwuru na okpukpe nke ọdịnihu ga-abụ "ụzọ ọkụ" zuru ụwa ọnụ nke dabeere na "Ụmụnna Ụmụ Mmadụ nile" (1995: 50). Okpukpe a nke ga-eso n'ọdịnihu ga-akụzi okpukpe nke ọdịnihu ahụ, bụ onye "a ga-amụ n'efu na mmekọrịta ya na nzukọ ọ bụla, òtù, okpukpe, nkwenkwe, ma ọ bụ ije" (1995: 50). Ọgbọ ọhụrụ ga-akara site n'ịdị n'otu nke ụmụ mmadụ site na imeri nkewa okpukpe, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na nke agbụrụ. Iwu iwu ndị ahụ kwuru na usoro iwu ahụ ga-arụ site na mmalite ebe maka ọzụzụ nke ụmụ akwụkwọ na "ọzụzụ ime mmụọ na ọrụ ebere" (1995: 50-51). Blighton kweere na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịmepụta ọnọdụ ime mmụọ na nke ọnọdụ ha chọrọ. Iwu iwu ndị ahụ kwuru, "Anyị na-anabata mmadụ ka ọ na-emepụta ihe na-enweghị njedebe na njedebe na-akparaghị ókè" (1995: 51).
Blighton kwukwara na n'usoro usoro nke sacramental na-adị adị, ma na ndị bi n'ụwa echefuru "ezi ọdịdị na ọrụ" nke sacraments (Lucas 1995: 52). Ya mere, otu n'ime ebumnuche bụ isi nke Akwụkwọ Nsọ nke MANS bụ iji weghachi ụdị nke sacramental. Blighton kwenyere na nke a nwere ike imezu site n'iji amamihe oge ochie na nchọpụta nke sayensị oge a. O kwusiri ike na nzọụkwụ mbụ na mweghachi nke sacraments ga-abụghachi ndị ụkọchukwu bụ ndị ụkọchukwu na-ekwu na ọ natara ikike nke eluigwe iji dozie ndị nchụàjà site n'aka Jizọs Kraịst. Ndị isi nke ndị ụkọchukwu ndị a guzobere ọhụrụ ga-eweghachite eziokwu nke Ndị Kraịst na-esote na chọọchị ndị isi.
Uzo nke nchichi ndi nchu aja bu nke emeputara n'uzo nke ndi madu. Akpa, onye nchoputa ahụ gbawara na karma nile gara aga na n'ọdịnihu, e weepụ ya na njikọ ụwa niile. Nke abụọ, nwa akwukwo ahụ kwetara nkwa ebighi ebi nke ije ozi ndị nchụàjà site na ịnakwere "Mkpanaka Ike" na eriri ọcha (Lucas 1995: 53-54). Nke atọ, a na-ebipụ ọkụ dị na ụlọ nsọ ahụ ma e wezụga maka otu ọkụ nke ìhè na-etinye na nwa akwukwo ahụ. Nke anọ, nwa akwukwo ahụ kuru ikpere n'ihu Blighton ma nata mgbaaka ọlaedo nke nwere gburugburu, triangle, na square e welitere n'elu ya. N'ikpeazụ, a ghọtara onye ụkọchukwu ọhụrụ ahụ dịka "onye na-eje ozi n'ụwa nile maka mmadụ niile" na "onye ụkọchukwu na-eje ozi n'Ọgbakọ Nsọ nke MANS, n'okpuru Ụkpụrụ Chineke Melkizedek" (1995: 53-54). A kwadoro ndị ụkọchukwu a họpụtara ahọpụta ka ha bụrụ ndị na-eto eto na-eso "Order nke Golden Cross." Ha ejikọtaghị aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke okpukpe, nanị ntinye aka ha bụ "Great Christos" ma ọ bụ "Onyenwe anyanwụ" (1995: 54). Onye nchu aja nwere onwe ya, site na Kraist, site na wheel nke karma mana iwu ka ọ nọgide na Order nke Golden Cross maka mmadụ asaa.
Site na okwu 1969-1972 Blighton, tinyere ihe ndị ọzọ dị na njem ahụ, jupụtara n'ụdị ọdịnala ndị Kraịst na ozizi. Blighton ahapụghị nkuzi ya; naanị ihe o kwuru bụ asụsụ ndị Kraịst. Ihe omuma nke nmekorita nke ndi Kristain putara ihe Blighton ji nke akwukwo nke agba ohu n'eme okwu ya, tinyekwuo nkwenye maka ememe nke uzo, iji ihe omuma nke ndi Kristain na akwukwo ndi ozo, na nkwuputa na 1972 na baptism aburu ihe ndi agha nile.
Na afọ abụọ tupu ọnwụ Blighton na 1974, e nwere ihe abụọ dị mkpa dị mkpa na nkwenkwe ndị otu. Nke mbụ, dị ka a kọwara na mbụ, bụ mgbakwunye nke Akwụkwọ Ọrụ (1972) na ndepụta otu nke ederede dị nsọ. Na Akwụkwọ Ọrụ bụ nchikota nke millenarian Blighton, mweghachi, na ọhụụ mmalite. A na-ekwenyekarị na ọ bụ okwu kpọmkwem nke Jizọs Kraịst, nke ga-eweba otu ụbọchị n'ime Akwụkwọ Ọrụ Akwụkwọ Nsọ. Mgbanwe nke nke abuo bu ihe ndi mmadu kwusiri ike nye Mary, nne Jisos. Mgbanwe a bụ echiche Blighton na-enye obi ụtọ na ụmụ nwanyị ga-etolite "ọnọdụ ime mmụọ kwesịrị ekwesị" n'oge ọgbọ ọhụrụ. Site n'imesi Meri ike, usoro a na-agbali ikwughari oru nke ndi nwanyi. Ihe ngosi maka mmepe a nwere ike ịhụ na nchikota Blighton nke ndị inyom na-ahụ maka ndị inyom 52 na oge a nakwa nke okike nke Ụmụnna Na-ahụ Maka Ụmụnna Mary nke Mary.
N'ime afọ isii sochirinụ Blighton iwu ahụ gbanwere ọtụtụ mgbanwe. Site na 1975, otu a ejirila, na nzukọ ọha na eze, ụda okwu Ndị Kraịst. Paul Anderson, onye otu MANS, gwara onye nta akụkọ akwụkwọ akụkọ Maine na otu ahụ kwenyere na "atọ n'ime otu, ozioma, ọgwụgwọ ime mmụọ, baptism, udo, na nkwupụta" (Lucas 1995: 145-46). Igwe okwu ọhụụ a gosipụtara ịrị elu nke okwu ngbasa ozi ọma na ọhụụ na ọdịbendị buru ibu nke mbubreyo 1970s America. Nke a bụ oge mgbe ndị mmadụ dịka Jimmy Carter na Bob Dylan kwupụtara nkwenkwe ha na Iso -zọ Kraịst a mụrụ ọzọ. Agbanyeghị, n'ime, iwu ahụ gara n'ihu na-akụzi nkuzi ya, nkuzi, na nkuzi izizi.
Ndụ kwa ụbọchị na obodo ndị a na-eme n'obodo ahụ na-aghọkwu ihe ntụrụndụ ma ọ bụ ntụrụndụ mgbe Blighton gafere, na ndị na-ekiri TV na ihe nkiri, na-ege egwu egwu egwu, ịgba egwú, na mgbe ụfọdụ iji wii wii. Ndị òtù ndị na-ahụ maka ndụ jiri 1976 na-achịkwa òtù ahụ. Nke a mere ka oge ọganihu dị iche iche na arụmọrụ mmekọrịta siri ike. Nzukọ ahụ mepụtara atụmatụ ndị ọzọ nke ndụ, nke gụnyere ọrụ "ezinụlọ". Ọrụ ndị a gụnyere ezinụlọ abụọ ma ọ bụ karịa na-akwaga n'obodo ebe iwu na-anọchiteghị anya, na ịmepụta ọrụ ọrụ ebere. Omume a na-eto eto nke alụmdi na nwunye na ndị ọrụ onwe ha mere ka enwekwaghị nkwurịta okwu ìgwè dị ka ọtụtụ ndị so na mbụ.
Site na 1978, Nzukọ Nsọ nke MANS amalitela ịhapụ nkụzi ime mmụọ mbụ nke Blighton. Nke mbụ, iwu ahụ na-ekwu okwu ya na Rosicrucian na nkuzi ọha na nke onwe. Nke abụọ, site na njedebe nke 1979, a napụrụ ndị na-ede akwụkwọ Ndị Kraịst dị ka Dietrich Bonhoeffer, CS Lewis, Richard Foster, na Juan Carlos Ortiz, nke Blighton's Tree of Life. Nke atọ, akwụkwọ ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-esite n'okpukpe esoteric Kraịst na-ewepụ ya. Nke anọ, usoro ọmụmụ nke ndị òtù ụmụnna na-aga n'ihu na-abụ nke a ma ama ma na nzuzo ma na nzuzo.
N'etiti 1980 na 1990, nkwenkwe na omume na-agbanwe agbanwe. Ndị na-eso ụzọ nke ndị na-eso ụzọ malitere ghọọ "Ọchịchị nke Ndị Na-eso Ụzọ." Nzube nke otu a bụ "icheta" akụkụ "onye nwe ụlọ" ahụ. Ndị mmadụ nọ na nke a "biri ndụ zuru oke" nke ịbụ onye na-eso ụzọ Ndị Kraịst "na ụwa" (Lucas 1995: 171-72). Ụlọ ọrụ Esoteric gbanwere aha ya na "Apostolic Council." Ihe a na-akpọ "MANS", bụ nke nabatara echiche ọha na eze na-ezighi ezi maka nsụgharị anwansi ya, bụ "nke a ga-ekwupụta okwu dị mkpa nke ìgwè ahụ n'asụsụ a nabatara ọkachamara ndị Kraịst" ( 1995: 173). Okwu a na-akọwa ugbu a dị ka okwu okwu Grik ihe omimi, agape, anyị, na Sophia ma sụgharịa dị ka "ihe omimi nke ịhụnanya Chineke nke e gosipụtara site n'obi nke Kraịst nke na-eweta amamihe" (1995: 173).
Onye isi nchịkwa Vincent Rossi weere usoro iji chebe ìgwè ahụ pụọ na mwakpo ndị omempụ na nke ngalaba site na-emesi nkwenye na ozi ndị Kraịst ike. O kwuru na n'adịghị ka ndị a sị na ha bụ "òtù nzuzo," Akwụkwọ Nsọ nke MANS enweghị "isi ihe na-esite na Akwụkwọ Nsọ" ma nyeghị ndị òtù ya aka n'ụzọ akụ na ụba (Lucas 1995: 173). Mgbe ntụgharị uche nke Rossi dị na Eastern Orthodoxy, ọ na-emezi ihe ndị na-edozi ahụ maka ndị òtù fọdụrụnụ. Na usoro a, o ji nwayọọ nwayọọ gbanwere nkwenkwe na omenala nke Ọtọdọks maka usoro Bọmọnic Rosicrucian / Theosophical. Ka ọ na-erule oge e nwetara akwụkwọ ahụ n'ime Chọọchị Ọtọdọks na 1988, ọ hapụrụ kpamkpam nke mbụ ya na nke ọhụụ ụwa na nke ọgbọ ọhụrụ ya ma gbanwee ya n'ime obodo ndị Ọtọdọks.
E nwere ememe anọ etiti anọ na HOOM. Ndị a gụnyere baptizim, udo, ìhè, na nghọta onwe onye.
E kweere na baptism bụ akara ntinye nke onye na-agba ume na "ụzọ ntinye nke ụwa" (Lucas 1995: 55). Site na baptism, nwa akwukwo ahụ kwupụtara ya / ntinye ya nye Kraịst. Blighton kwuru na baptism wetara "Christ Force" n'ime ahụ mmadụ (1995: 55). Ụdị nke a ga-amalitekwa ịme "ọhụụ dị ugbu a." Nke a ga-ewepụ "mmetụta nke njehie gara aga" site na ahụ mmadụ (1995: 55). E nwere ụzọ anọ iji mee baptizim. Nke mbụ, onye mbido wepụtara oge na-achọgharị anya. Ọzọ, ọ na - ekwupụta nkwupụta zuru ezu nke njehie gara aga nye onye ụkọchukwu. Nke ato, onye nabatara kwetara na ha raara Kraịst nye ma jiri mmanụ na-ete ya n'egedege ihu dị ka obe. N'ikpeazụ, a ghọtara ihe anụ ahụ dị iche iche iji nweta nnyefe sitere na "mpaghara ọzọ nke okike" (1995: 55). Ná ngwụsị nke ememe ahụ, a gụrụ Abụ Ọma 23.
Ọgbakọ bụ ntọala nke usoro ịme ememe kwa ụbọchị. N'oge udo, a na-etinye àgwà na mmata nke Jizọs Kraịst n'ime ikpere ikpere n'ala dịka s / ọ natara achịcha na mmanya a raara nye. A kwadoro usoro a na-agbaso ihe ngosi 1967 na Blighton.
N'aka ìhè, a kụrụ "ọkụ ọhụrụ" n'ime ahụ anụ ahụ. A na-ezobe usoro ihe omimi ahụ, mana ọ na-emekarị n'abalị n'ihi na e kwuru na magnetic agha dị ike na abalị. Mbụ onye mbido jiri oge na-atụgharị uche. Nke abụọ, ụkọchukwu ahụ mepụtara oghere n'ime ahụ maka ìhè ọkụ ahụ ịbanye. N'ikpeazụ, mgbe ha natarachara ìhè ahụ, ha jiri oge 24 na nzuzo (Lucas 1995: 58).
Omume ma ọ bụ ịghọta onwe onye dị ọbụna karịa ka ìhè. Ọ dịkarịa ala, otu onye nkụzi na-enye ntụziaka kọwapụtara oge ahụ dịka nsụgharị neo-shamanic nke mkpuchi etheri nke gbara gburugburu nke onye n'ime ya. Mgbe emechara ememme ahụ, a kwenyere na "a ghọtara" na-enwe ike ịnweta nkwurịta okwu site n'aka "Chineke" n'ime (Lucas 1995: 59).
Nchịkọta iwu na-achịkwa na-agụnye isi mkpebi ikpe, Chọọchị Esoteric (nke Blighton na-achịkwa dịka Onye isi oche), na ọkwa dị iche iche gụnyere "ndị nkuzi nnabata," ndị nkuzi nwanne, ndị ụkọchukwu, ndị ozi, ndị kwere nkwa ndụ, na novices. N'ime afọ iri nke otu, ọ gbasawanyekwara ọbịbịa ya iji gụnye ndị na-eso ụzọ ndị na-eso ụzọ na ndị ezinaụlọ (Ndị Kraịst) bụ ndị nwere mmasị n'ịme usoro ụzọ nke mmụọ nsọ. Blighton mekwara "iwu abụọ," ndị nne na nna nke Mary, na Ụmụnna Brown nke Mọ Nsọ, iji nye ọzụzụ maka ndị òtù nke òtù ụmụnna ahụ. Ndị òtù ndị isi na-arụ ọrụ obodo, na-eme di iche iche Marian devotions, ma na-aga ozi ala ọzọ.
Na 1980s, Council nke Esoteric ghọrọ Omeiwu Apostolic, ya na Co-Directors General ka na-ejide ikike zuru oke n'usoro ọchịchị.
Akwụkwọ Nsọ nke MANS, dị ka ọtụtụ okpukpe ọhụrụ, ghọrọ òtù nke òtù nzuzo na-emegide òtù nzuzo, na nke bụ òtù òtù ndị isi. Otu akwụkwọ 1972 dị na San Francisco Chronicle mere ka ikike Blighton kwenyeghị na njem ahụ nakwa nkwa nke ịda ogbenye na nrubeisi nke ndị òtù ahụ were. Isiokwu ahụ jikwa ajụjụ Blighton chipation, nke o kwuru na ọ bụ ígwè ọrụ diploma na Florida. Otú ọ dị, ihe kachasị mkpa nke chere ihu na HOOM bụ ịmepụta ọtụtụ ụdị schismatic. Ndị a dị iche iche gụnyere Gnostic Order nke Kraịst, Science nke Mmadụ, Ụlọ Amụma America, Ndị Ohu nke Ụzọ, na Foundation nke Christ Church.
A na - ejikarị oge dị iche iche nke òtù 1970s mee ihe n'usoro iwu nke MANS. Na November 18, 1978, akụkọ mbụ nke Jonestown gburu onwe-igbu ọchụ ruru mgbasa ozi mba. N'ime oge dị mkpirikpi, ọdịbendị omenala dị na America banyere okpukpe ọhụrụ gbanwere site na nkwụsị na ọchịchọ ịmata otu n'ime enyo na iro. Ogbagwoju anya na-eji ọnọdụ egwu egwu na nnupụisi na ọnọdụ Jonestown iji mee ka mgbalị ya sikwuo ike iji mee ka ụlọ ọrụ gọọmentị nwee ike ịchịkwa "òtù nzuzo ndị dị ize ndụ." Iwu ahụ pụtara na "òtù nzuzo" nke òtù ndị dị otú a dị ka Ụlọ Akwụkwọ Ndị Kraịst na-eme nnyocha. Ihe Mgbochi Ime Mmụọ. Iji mee ka ihe ka njọ, òtù ụmụnna malitere ịmalite inwe mmeri nke ndị òtù na nkwụsị elu nke ntinye ego.
Na nzaghachi nke nsogbu a, Vincent Rossi bidoro ịgbachitere iwu ahụ n'ọtụtụ nnọkọ ọha na eze. Njedebe nke mgbalị ndị a bụ akwụkwọ Rossi nke 1980 n'akwụkwọ akụkọ ahụ, Epiphany. Edere "Site na Mkpụrụ ha Ka Ị Ga-ama Ha: Na-ekwupụta Nzuzo Ime Mmụọ nke Ụdị Nsọ nke Ndị Mmadụ na Oge Ọgbọ," isiokwu ahụ gosipụtara ịrịọ mgbaghara nke na-agbachitere usoro iwu nke Ndị Kraịst na ntọala ya. Rossi kwuru na ebumnuche nke òtù ụmụnna bụ ịzụlite obodo Ndị Kraịst nke ewuru gburugburu ofufe nke Chineke, ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst, na ijere ụwa ozi. O kwuru, sị, "na-agbaso ụkpụrụ nke omenala Ndị Kraịst." Rossi kwukwara ịchọta ihe ga-eme n'ọdịnihu n'akụkọ ihe mere eme nke Iso Ụzọ Kraịst maka ihe òtù ụmụnna na-agbalị imezu n'ụwa.
N'etiti ndị nọchiri anya ya, Christ the Savior Brotherhood (CSB) bụ ndị fọdụrụ na Chọọchị Ọtọdọks nke Akwụkwọ Nsọ Mbụ nke MANS. Onye isi oche bụ Vincent Rossi, mgbe ọ gbasasịrị onwe ya na Eastern Orthodoxy, dugara iwu ka ya na otu Archdiocese nke Ọtọdọks nke Queens, New York. Ntughari nke Orthodox a mechiri na 1988 mgbe ndị òtù 750 HOOM gbanweere na Eastern Orthodoxy. Kraist Onye nzoputa Onye nzoputa di iche site na iwu mbu nke ndi madu. Phillip Lucas kwuru na Odyssey nke Okpukpe ọhụrụ na "CSB na-ekwenye na ecumenism na mmalite ya na nkwenkwe ya na okpukpe niile nwere eziokwu nke eziokwu. Ọ hapụrụ Gnostic / Theosophical cosmology na Christology ma na-agbaso kpamkpam ozizi nke Eastern Orthodoxy "(Lucas 1995: 248). Tụkwasị na nke ahụ, nsụgharị CSB na-elegharị anya dị ka "effluvia nke onwe ya" na mgbe ụfọdụ "ozizi ndị mmụọ ọjọọ" (Lucas 1995: 249).
Mgbanwe abụọ ọzọ CSB weputara bụ: (1) Ụdị okpukpe nke Orthodox na-edozi usoro ememe sacramental, na (2) ụmụ nwanyị si n'aka ndị isi ụlọ ọrụ, bụ ndị megidere HOOM dịka ndị isi nke ndị nchụàjà. Mgbanwe ikpeazụ nke CSB nwere nchegbu gbasara nkwenkwe ndị Millennar Blighton. Lucas na-akọwa, sị, "Millennialism nke Blighton, nke na-ele anya na-atụgharị anya na mmalite nke ọhụụ ime mmụọ, ejiriwo otu òtù okpukpe nke Orthodox apocalypticism dochie ya. Ọhụụ a na-atụghị anya ya na-elekwasị anya na onye àmà na-abịanụ bụ onye ga-eme ya, ọ na-ekwere, na-eduga ọtụtụ n'ime ụmụ mmadụ ka ọ bụrụ ịda mbà "(Lucas 1995: 249).
Otú ọ dị, CSB nọgidere na-enwe ọtụtụ àgwà nke Akwụkwọ Nsọ nke MANS. Nke mbụ, CSB nọgidere na-agba mbọ maka ọrụ ebere. Nke abụọ, CSB nọgidere na-eji ezigbo ihe ndị mọnk akpọrọ ihe. Nke atọ, CSB nọgidere na-enwe mmasị na "mmalite, mgbagwoju anya nke ọma, na ahụmahụ karịrị nke mmadụ" (Lucas 1995: 249). Lucas na-ekwu, sị, "Ịga n'ihu nke anọ na-emetụta mmemme na mmemme nke mmemme ahụ n'oge nile ya n'akụkọ ihe mere eme" (1995: 250). Akwụkwọ Nsọ nke MANS nwere "nlọgharị" nke ememe na ememme (1995: 250). Ufọkho HOOM a na-arụ ọrụ nke ọma na arụmọrụ kasị mma nke Eastern Orthodoxy.
The mbụ Christ Onye Nzọpụta Ụmụnna website ebute CSB ozi, nzube, na otu. O kwupụtara, sị, "Kraịst Onye Nzọpụta bụ Ụmụnna raara onwe ya nye iwetara ìhè na eziokwu nke Iso Ụzọ Kraịst Ọtọdọks na ndị nke na-ala n'iyi n'ụzọ ime mmụọ na oge ndị a dị oké mkpa. Nzube bu isi anyi bu ijere Kraist Onyenwe ayi na Onye nzoputa anyi na madu ibe ayi ozi. "Ọzọkwa, ulo oru a kpowara," ndi otu n'ime Kraist Onye nzoputa Onye nzoputa diri ndi okenye nile ndi Krischianya baptism bu ndi choro rara onwe ha nye Kraist site n ' Mgbalị ime mmụọ nke Òtù Ụmụnna. A na-achọpụta na ndị òtù ga-arụ ọrụ site na itinye aka na ọrụ na ịgbalịsi ike n'Òtù Ụmụnna, ọ bụghị naanị site na mkpakọrịta "(Christ the Savior Brotherhood nd)
Taa, Kraist na Onye Nzọpụta bụ òtù ụmụnna na-abụkarị nzukọ na-abụghị nke na-elekọta CSB ezigbo ala na akụ ma na-akwalite ọdịbendị na mmụta mmụta nke Ọtọdọks. Òtù ụmụnna na-ebipụta Okporo ụzọ Emmaus: A Journal of Orthodox Faith and Culture, nakwa banyere akwụkwọ asatọ dị iche iche gbasara ndụ na mmụta nke Ọtọdọks. Ọ na-arụkwa Ụlọ Akwụkwọ Ndị Ozi Alakụba St. Paisius, bụ ndị na-akwado nzukọ, nzukọ, na ogige ndị ntorobịa e mere iji kpọte ịnụ ọkụ n'obi maka ọdịnala nke ndị Ọtọdọks omenala.
Ndị òtù mbụ nke HOOM nọ na October 19, 1988. Otu akwụkwọ nke Gnostic Order nke Kraịst kwuru na, "Ọ bụ ọrụ nke Gnostic Order nke Kraịst iji nọgide n'ọrụ ime mmụọ nke Akwụkwọ Nsọ nke MANS malitere. Anyị na-asọpụrụ Nna Paul dị ka onye nchoputa ihe ngosi nke ugbu a nke Ụzọ Ọdịda Anyanwụ na anyị na-achọ ịgbaso Ụzọ n'ụzọ omenala kwesịrị ekwesị maka oge ọhụrụ a. Anyị na-achọ ịbụ ndị na-ejere ihe a kpọrọ mmadụ ozi na iji nye ntọala ime mmụọ na nkwado maka ndị na-achọ Nghọta site na omenala ọdịda anyanwụ. "
Usoro Gnostic nke Kraịst dị iche na Usoro Dị Nsọ nke MANS, dị ka a hụrụ site na ntinye okwu, na ọ gaferela nkuzi okpukpe ọwụwa anyanwụ nke Order, na-ekwusi ike karịa "Western Esoteric Path". Ebe ohuru a kwughachiri ihe a site na mmeghe wee kwuputa ochicho nke Order inye “usoro ime mmuo maka ndi a na akpo The Path of the Western Tradition nke Oku mgbe usoro nke Melkizedek nke The Order of the Holy Cross” (“History, Structure) & Nzube ”nd). Akwụkwọ bụ́ Gnostic Order na-ekwu, sị, “Ihe omume ime mmụọ anyị nwere ihe isii: ekpere, nlegharị anya, ntụgharị uche, ịtụgharị uche, iji ịhụnanya na-egosipụta ofufe, na omume ịhụnanya.” Ọ na-atụ anya inwe “ebe ndị a na-anọ efe ofufe, ebe mmụta, na ọrụ ebere.” Ozizi ya gụnyere Akwụkwọ Nsọ na "akwụkwọ nsọ ndị ọzọ" ("History, Structure & Purpose" nd). Iwu ahụ emeela ka elekwasị anya na HOOM na ntinye uche Marian na ndị ohu ya na-enweghị obi ebere nke Meri na-ekpe ekpere na ekpere Marian na ntụgharị uche.
Science nke mmadụ ụka (SOM) bụ nke mbụ nke Blighton tọrọ ntọala na mpaghara San Francisco Bay n'oge mmalite 1960s. Ndị otu ahụ ejighị aha mbụ ya, na-apụ kama maka Akwụkwọ Nsọ nke MANS. N'oge Akwụkwọ Nsọ nke MANS 'na-aga n'ebe Chọọchị Ọtọdọks nke Ọwụwa Anyanwụ, Ruth Blighton kwụsịrị iwu ahụ ma weghachite Science nke Man Church. Ọ kwagara Oregon na etiti 1980s wee nọgide na-arụ ọrụ dịka nduzi ime mmụọ nye ndị nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye ihe nketa nke Earl Blighton. Ruth Blighton nwụrụ na 2005.
Websitelọ ọrụ SOM na-ekwu, “Sayensị nke mmadụ na-aga n'ihu na-eme ka nkuzi nke Dr. Blighton dịgide ma na-agba mbọ ịrụ ọrụ na ebumnuche nke inye aka ịkọwa nghọta zuru oke banyere Iwu Okike nke Onye Okike, ka mmadụ niile wee gosipụta okike ya nke ọma ma si otú a na-akwalite udo na nkwekọ n'etiti mmadụ niile ”(“ Science of Man ”nd). Weebụsaịtị ahụ na-ekwukwa, "Ọ bụ ebumnuche anyị gosipụtara iji wepụta nkuzi amamihe ndị Kraịst oge ochie dịka a kụziri ha n'oge ochie" ("Science of Man" nd). Chọọchị ahụ edebewokwa akara ngosi nke iwu ahụ, gburugburu, triangle, na ịgafe n'etiti square. Agbanyeghị, ụdị nke Science of Man church nke oge a etinyewokwa phoenix na akara ngosi ahụ. Phoenix bụ “mmeri nke ọnwụ ma ọ bụ mgbanwe niile.” Sayensị nke Mmadu kwuru na otu ụkọchukwu nke ndị ụkọchukwu gara aga na United States. Ebe nrụọrụ weebụ ya ugbu a depụtara naanị Rev. Donald Slakie na Scottsdale, Georgia.
Ntọala nke ụka Kraist bụ ọgbakọ nke anọ gbapụrụ agbaji nke Holy Order nke MANS. Ebe nrụọrụ weebụ ntọala ahụ kwuru na "Ntọala nke Kraịst bụ nzukọ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị akpọkọtara iji kwalite nghọta zuru oke banyere iwu Chineke na nke Okike, yana nkuzi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na Christian Mysteries oge ochie. , dika nkuzi ekpughere nke ubochi a, dika Akwukwo Nso na okwu nke Onye-nwe-ayi Jisos Kraist si di 'Agagh ekpughe ihe omimi nile' (“Foundation of Christ Church” nd). Ebe ahụ kwuru na nzube abụọ nke ụka bụ ịkụzi iwu nke okike na ijere Chineke ozi site na ịme ka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị niile dị n'otu.
The Foundation ji osisi nke Ndụ nkuzi dị ka ụzọ isi kụziere na-akpakọrịta ndị òtù ya. Dika edeputara ya na ebe nrụọrụ weebụ ya, ntọala ahu ziziri "Osisi nke Ndụ dika ndi ochie nyere ya dika map nke ihe okike-na egosi uzo ma obu uzo ndi sitere na Chineke rue okike ya ma laghachi. Anyị nwere Ọmụmụ Bible ma na-eme omume ime mmụọ ndị e mere iji kpalie ikike mmụọ nke Chineke nyere anyị n'ime ya. "Ụmụ akwụkwọ mụtara" Akwụkwọ Nsọ, na Iheọrụ Chineke, Nna gị nyere gị n'elu Eluigwe tupu ị bata site na baptism gị n'ime ụwa . "Ebe nrụọrụ weebụ maka nke a anaghịzi adị na weebụ.
Templelọ nsọ nke America bụ otu agba nke ise nke Holy Order nke MANS. Otu a gara n'ihu na-eji ụfọdụ nkuzi izizi nke Earl Blighton yana ederede okpukpe nke iwu. Templelọ-nsọ ​​na-achọ ịmata ihe kpatara “ndụ na ụdị ahụmịhe ya nile dịgasị iche na ọpụpụ nile bụ ihe mmeghe na-aga n’ihu nke Mkpughe” (“Welcome to the American Temple” nd). Azịza nye ajụjụ a, dị ka ụlọ nsọ ahụ si kwuo, sitere na ntinye na Iwu Dị Nsọ nke MANS 'Philosophy of Initiation Sacramental. Nkà ihe ọmụma a na-ekwusi ike na, “N’ụzọ dị mfe, Nghọta nke Mmụọ Nsọ, Nna na Chukwu, wetara eluigwe na ụwa site na ịtụgharị uche na onwe ya. E si otú a na-ese onyinyo ụkpụrụ Chineke n'oge ihe nile e kere eke. N’ebe obula n’eluigwe, Mmụọ na-arụ ọrụ n’ime mkpụrụ obi iji mepụta ngosipụta-mmụọ nke gụnyere n’ụdị ”(“ Welcome to the American Temple ”nd).
Nkuzi nke abuo nke Blighton diri nke n’adigide na Templelọ Nsọ nke America bụ ilekwasị anya na akara ngosi ndụ. Otu omume dị mkpa nke Templelọ Nsọ America bụ chromotherapy. Chromotherapy bụ iji agba dị iche iche gwọọ ọrịa. Blighton deziri akụkụ "Color Philosophy" nke Chromotherapy. Ebe nrụọrụ weebụ Templelọ Nsọ ndị America na-akọwa, “N'ịgwọ ọrịa site na agba, a na-eji ụzọ aghụghọ na nke kachasị mma na okike mee ihe kama iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-akpasu iwe. A na-etinye radiations nke ìhè anyanwụ site na usoro ụjọ ahụ ma kesaa ya na iyi ọbara n'akụkụ dị iche iche nke ahụ "(" Okwu Mmalite nke nkuzi nkuzi chromotherapy "nd).
Templelọ nsọ ndị America kwenyere na ọgwụ ọgwụ na-ahapụ "ihe fọdụrụ" n'ime ahụ mmadụ. Ka ahụ na-anwa ịhapụ onwe ya ihe ndị a, a na-emebi ihe n’ahụ. Ibe akwukwo ulo uka nke ndi America choro na chromotherapy na ekwu, “Agba bu ike kachasi nke apuru idobe na onodu mmadu nke gha aru oru nke kwesiri ka emepu ya, ma obu ike nile. Enweghị ihe fọdụrụ iji merụọ ahụ, ọ bụkwa ihe fọdụrụnụ na-eme ka ahụ ghara inwe ahụ ike "(" Introduction to Chromotherapy Lessons "nd). Dabere na ụlọ nsọ ahụ, ụkpụrụ nduzi ndị dị mkpa ịgbaso mgbe ị na-aga chromotherapy gụnyere ibelata anụ oriri, izere tii na kọfị, iwepụ ụtaba na mmanya na-aba n'anya, ị drinkingụ mmiri na mmiri mkpụrụ osisi, ịzere ihe na-atọ ụtọ karịa sọlfọ dioxide, yana izere ọgwụgwọ chromotherapy na ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ na n'oge ọnwa na-eji n’ehihie.
Isi ụlọ ọrụ a nke ikpeazụ a bụ isi na Oregon na Dominic Indra, onye bụbu onye ụkọchukwu. Dabere na weebụsaịtị ya, otu a "na-enye ụzọ dị ndụ maka nnabata Esoteric Christian na ọdịnala Gnostic. Baptizim, Ìhè, Nghọta Onwe na Nhọpụta bụ Mbelata Anyanwụ nke dịịrị ndị niile na-etinye ndụ ha n'ijere onwe ha ozi na-akwadoghị mama / Nna Onye Okike site n'aka Nna anyị ukwu Christ Jesus. Ọzọkwa, “Ọ bụ ebumnuche nke Servants Of the WAY iji wepụta nkuzi na ike mgbanwe nke Kraịst Jizọs. Uzo a bu aha di iche iche di iche iche tinyere akwukwo ihe omumu nke oge ochie, ihe omumu ihe omimi, ihe omimi nke Grail, ndi Gnostic Christianity na Esoteric / Mystical Christianity. Ndị Ohu nke AYzọ abụghị otu ma ọ bụ nzukọ. Onweghi ihe isonye. A dịghị akwụ ụgwọ n'ọrụ anyị na-arụ. Ọ bụ isi mmalite nke intozọ. Naanị ihe anyị chọrọ bụ ịkọkọrịta ahụmịhe ndị anyị nwetara n'ime ọtụtụ iri afọ nke ịmalite ọrụ n'ime ụlọ wee webata ndị ọzọ n'ụzọ nke ọrụ ”(Banyere Ndị Ọrụ nke ”zọ Ahụ” nd).
Ogologo ihe ndi ozo bu ihe kachasi mma n'olu ndi ozo di na ya. Nke mbu bu uzo Raphael House, nke mere ka ndi mmadu mara banyere ime ihe ike n'ulo na mkpa maka ulo ndi a na-edeghi aha maka umu nwanyi na umuaka. Nke abụọ bụ Mmekọrịta nke iri na otu nke Rossi, bụ nke nyere aka n'ịmepụta Nzukọ North America banyere Iso Ụzọ Kraịst na Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ nakwa na ịzụlite ndị mmadụ n'etiti ndị Kraịst. Ihe atumatu nke ato bu ihe ndi mmadu choro ka ha buru ndi mmadu na ndi otu nwanyi. Ọtụtụ ụka dị iche iche na-edozi ụmụ nwanyị, gụnyere ndị Episcopalians na ndị Lutherans. Ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ na-abawanyewanye na chọọchị Katọlik Roman Katọlik, na-arụ ọrụ dịka ndị nchịkwa ụka na ndị isi ụka na-arụ ọrụ ndị ọzọ. O doro anya na ndị òtù ahụ bụ ndị ghọrọ ndị Ọtọdọks nke Ọwụwa Anyanwụ ugbu a na-akwalite ọdịbendị a nke ndị inyom bụ ndị nchụàjà.
Akụkọ ihe mere eme na-enyekwa ihe àmà doro anya na gluu nke jikọtara ọnụ ọgụgụ okpukpe ọhụrụ nwere ike ịbụ isi na-emetụta ọdịdị kama ide echiche. Tinye ụzọ ọzọ, ọtụtụ ngbanwe nke ozizi ndị na-akọwa NRM na ọgbọ mbụ ha adịghị ebute nkwanye mmekọrịta dị iche iche ma ọ bụrụ na nkwenkwe ahụ dabeere na mmetụta siri ike nke ịdị n'otu na ịhụnanya. N'ikpeazụ, akụkọ ihe mere eme na-eguzo dị ka ihe atụ zuru oke nke otu NRM si agbaso gburugburu ebe obibi ha. Ọhụụ nke mmụọ nke Blighton, nke na-adịghị ahụkebe na nke ụwa na-egosi ụdị ọchịchọ nke otutu XML, 1960 na 1970s. N'ụzọ yiri nke ahụ, òtù ụmụnna nke Kraịst bụ Onye Kraịst na-ahụ maka ọdịnala gosipụtara nkwenkwe okpukpe ndị na-eto eto na ime mmụọ nke liberalism nke mara 1980s America.
"Welcome to the Temple of America." American temple. Nweta site na http://www.americantempleusa.org/1st-visit.html na 26 July 2012.
Blighton, Earl W. 1972. Akwụkwọ Ọrụ. Akwụkwọ Nsọ nke MANS bipụtara.
“Kraịst Onye-nzọpụta Brothermụnna.” Nweta site na http://www.csborthodox.org/index.html on 26 July 2012.
"Ntọala nke Chọọchị Kraịst." nd Nweta site na http://millennium.fortunecity.com/ruthven/190/.
Gerjevic, Sandi. 1999. "Ndị Ọchịchị Senti." Anchorage Daily News, February 1, p. 1.
"History, Structure & Nzube." nd Iwu Gnostic nke Kraịst. Nweta site na http://www.gnosticorderofchrist.org/about/historypurpose.htm na 26 July 2012.
Iwu dị nsọ nke mmadụ. 1967. The Golden Force. Iwu dị nsọ nke mmadụ.
Okwu Mmalite nke nkuzi Chromotherapy. ” nd American temple Nweta site na http://www.americantempleusa.org/newsletter/exercises/colors/pronaoscolors/chromotherapy.html na 27 July 2012.
Lucas, Phillip Charles. 1995. Odyssey nke Okpukpe Ọhụụ: Akwụkwọ Nsọ nke mmadụ site na Ọgbọ Ọhụrụ gaa na Ọchọdọks. Indianapolis: Ụlọ Akwụkwọ University nke Indiana.
Lucas, Phillip Charles. 2004. "Ọhụụ Ọhụrụ na 'Acids' nke Ọdịnihu." Nova Religio 8 (2): 28-47.
"Science nke Mmadụ." Nd Sayensị nke Mmadụ. Nweta site na http://www.scienceofman.org/home/index.html na 26 July 2012.
“Banyere Ndị Ohu nke thezọ. nd Ndị na-eje ozi n'ụzọ. Nweta site na http://www.meetup.com/Servants-of-the-Way/ na 27 July 2012.